एक दर्शकको लागि खेल्नु – क्येटी परकिन्स् - SportGoMag
Photo Credit: डन माइलस् व्दारा खिचिएको फोटो
एक दर्शकको लागि खेल्नु – क्येटी परकिन्स्
प्रारम्भिक २० वर्षको उमेरमा आफ्नो दिमागमा म न्युजिल्यान्ड महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको लागि एउटा जवान प्रतिस्पर्धी बन्छु भनेर साची सके पछि, क्येटी परकिन्स्ले आफ्नो उद्देश्यबाट आफूलाई टाढा र हराएको महसुस गरिन । तर जब उसले खेल प्रभुलाई सुम्पिन् तब उसको खेलाडी जीवनले सकारात्मक मोड लियो । उसले जनवरी २०१२ मा न्युजिल्यान्ड ह्वाइट फर्नस्बाट आफ्नो खेल जीवनको सुरुवात गरिन्, र त्यसपछि १०० भन्दा बढि अन्तराष्ट्रिय खेलमा खेलिसकेकी छिन् । उनी पेशागत रुपमा न्युजिल्यान्डको प्रहरी अधिकारी पनि हुन्, ३० वर्ष कि क्येटी परकिन्स् ले आफ्नो प्रभुसँगको सम्बन्ध आफुले गर्ने सबैकुरा भन्दा अगाडि राख्छिन् ।
न्युजिल्यान्डको लागि क्रिकेट खेल्नु मेरो पहिलो सपना थियो । म ५ वर्षको हुदाँ देखि नै, यो सपनाले जति जोस मलाई अरु केही कुराले दिदैँन थियो । मसँग अरु खुबि पनि थियो तर क्रिकेट सबै भन्दा माथि आयो ।
म मेरो परिवारको कारणले, मेरो जीवनमा परमेश्वरको एक बलियो प्रभाव भएर मण्डली गएर हुर्किएको हुँ । म एकदमै राम्रो र सन्डे स्कुलमा चाडै सिक्ने बच्चा थिए, तर राम्रो बच्चा हुनु र परमेश्वरलाई चिन्नु यी दुई एकदमै फरक कुरा हुन् । यो म १५ वर्षको सम्म हुँदा भयो, केही वर्षको लागि एउटा असल साथीले मलाई मेन्टरिङ गर्यो, तब मैले परमेश्वर सम्बन्धिको पक्षहरु बुझ्न थाले । म सम्झिन्छु एक बिहानी मण्डलीमा, मैले प्रार्थना गरेर उहाँलाई भने कि म उहाँलाई पछ्याउन चाहान्छु, मेरो जीवन उहाँको महिमा गर्नको लागि जिउन चाहान्छु । त्यो क्षणमा, पवित्र आत्माले मलाई भर्नुभयो र भावना र मेरो शरीरमा वृद्धि भएको एड्रेनालिन एकदम अवर्णनीय थियो ।
तर किनकि म क्रिकेट खेललाई एकदम माया गर्थे, मेरो पेशातिर लाग्नु नै मेरो परमेश्वर बन्यो । मेरो आत्मसम्मान क्रिकेट फिल्डमा मेरो सफलता वा असफलताले नै परिभाषित गर्थ्यो । मेरो स्वभाव मैले त्यो दिन कस्तो खेले त्यसमा निर्धारित हुन्थ्यो ।
मेरो २०१०–२०११ कठिन सिजन पछि मेरो ह्वाइट फर्नस्मा खेल्ने सपना पहिलेको भन्दा अझ बढि टाढाँ भएको अनुभव भयो । मैले केही कुराहरु बदल्नु आवश्यक थियो । यो भएको अफसिजनले मेरो पूरा जीवन बद्लिदियो ।
म अप्रिल २०११ मा “अल्टिमेट ट्रेनिङ क्याम्प” मा गए, जुन ख्रीष्टमा केन्द्रित थियो । त्यहाँ मैले अरु खेलाडीहरुलाई पनि भेटे जोसँग परमेश्वरको लागि हृदय थियो, सबैजना आफ्नो खेलको वातावरणमा परमेश्वरको ’boutमा अझ बुझ्न चाहान्थे । परमेश्वरले मेरो फिल्डको परिणाममा होइन तर मेरो खेल खेलाईमा वास्ता गर्नु हुन्छ भन्ने सत्यले मेरो आखाँ खुल्यो । मैले परमेश्वरको निम्ति खेल्न सिके, एक दर्शकको लागि र मेरो साँचो मूल्य, जुन परमेश्वरमा मात्र भेटिन्छ ।
जसै हिउँद लाग्यो, मेरो मिल्ने साथीले मलाई चुनौती दियो कि परमेश्वर मेरो क्रिकेट खेलमा कहाँ हुनुहुथ्यो । सत्य यही थियो कि उहाँ कतै पनि हुनुहन्न थियो । पछि धेरै प्रार्थना र म कहिल्यै पनि ह्वाइट फर्न हुन्न भन्ने वास्तविकता सँगको संघर्ष पछि, मैले के प्राप्त गर्नसक्छु लाई हाईन तर म कस्तो छु त्यसैलाई नै प्रेम कसरी गर्ने भन्ने बुझ्न खोजे । अर्को सिजन नजिकिँदै गर्दा, मैले आफ्नो आजीवनको सपनालाई छोडेको थिए र क्रिकेटलाई प्रभुको हातमा सुम्पिदिएको थिए ।
जुन स्वतन्त्रता र आनन्दका साथ मैले खेले त्यसले मलाई सफलतातिर डोर्यायो र मैले थाहा पाए अनुसार अहिल्यै सम्मको अविराधी गर्मी, र त्यो फोन कल बाट मैले थाहा पाए कि म ह्वाइट फर्न बन्न सक्छु भनेर ! जसले मेरो आँखा भरि खुशीको आशु ल्यायो ।
म इच्छा गछु कि म सधैँ यस्तै स्वतन्त्र र खुशीका साथ खेल्न सकु तर म सक्दिन । मैले निरन्तर संघर्ष गरे । जसै जीवन र क्रिकेट मेरो मार्गमा आयो, मैले मेरो ध्यान अर्कातिर मोडे र क्रिकेटलाई नै पूर्ण प्राथमिकता दिए । टि ट्वान्टि विश्वकपको सेमिफाइनलमा, क्रिकेटको लागि मेरो प्रेम अस्तित्वविहीन थियो । म धेरै मन्द थिए । मैले थाहा पाए कि मेरो जीवनमा परमेश्वर छुटिरहनु भएको थियो । मेरो प्रार्थनाहरु एउटा बहिरो कानमा पर्यो भन्ने मलाई लाग्यो, तर वास्तवमा, त्यो म थिए जो परमेश्वरप्रति बहिरो भएको थिए ।
जब म न्युजिल्यान्ड फर्के, मैले सहयोगको लागि हात फैलाए । म च्यापलिन र मानसिक सीप भएको प्रशिक्षकसँग भेटे । म मण्डली जाने कुरामा एकदम अनुशासित बने र मेरो खेललाई बाटोमा आउन दिइन । म एउटा भइरहेको काम जस्तै व्यक्ति हुँ, तर मलाई थाहा छ कि म सहि दिशामा गईरहेको छु – प्रभुसँग नजिक र एकदम नजिक ।
जब म हार्छु सधैँ मेरो हारको सामना राम्रोसँग गर्न सक्दिन । यो निरन्तर भइरहने युद्ध हो । तर म आफूलाई परमेश्वरको सत्यताको सम्झना गराउने प्रयास गर्छुः म पर्याप्त छु, म पूर्ण रुपले प्रेम गरिएको छु । जब खेल्ने क्षमतामा मेरो आत्मबल कम हुन्छ तब म आफूलाई २ तिमोथी १ः७ सम्झाउँछु जसमा लेखिएको छ, “.. परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ ।”
यो सत्यतासँग मैले १०० – मिटरको दौड सुरु हुने ब्लकमा उभिएको एक खेलाडीको एउटा बलियो दृष्य जोडेको छु । बन्दुक पड्किनु र दौडको अन्त्यको बीचमा जे पनि हुन्छ त्यसले अहिलेको जीवनमा खेलाडीको तत्कालीन भविष्यमा प्रभाव पार्छ । तर त्यो खेलाडीको लागि परमेश्वरको प्रेम र बलिदान दौडको सुरु देखि अन्त्यसम्म हुन्छ ।
अब मेरो उद्देश्य भनेको मेरो खेलमा र मेरो जीवनमा मेरो विश्वासले एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको होस् । र अरु खेलाडीको जीवनमा पनि यहि कुरा देख्दा म त्यसलाई एकदमै कदर गर्छु ।
क्येटी परकिन्स् , न्युजिल्यान्डका क्रिकेटर
प्रारम्भिक २० वर्षको उमेरमा आफ्नो दिमागमा म न्युजिल्यान्ड महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको लागि एउटा जवान प्रतिस्पर्धी बन्छु भनेर साची सके पछि, क्येटी परकिन्स्ले आफ्नो उद्देश्यबाट आफूलाई टाढा र हराएको महसुस गरिन । तर जब उसले खेल प्रभुलाई सुम्पिन् तब उसको खेलाडी जीवनले सकारात्मक मोड लियो । उसले जनवरी २०१२ मा न्युजिल्यान्ड ह्वाइट फर्नस्बाट आफ्नो खेल जीवनको सुरुवात गरिन्, र त्यसपछि १०० भन्दा बढि अन्तराष्ट्रिय खेलमा खेलिसकेकी छिन् । उनी पेशागत रुपमा न्युजिल्यान्डको प्रहरी अधिकारी पनि हुन्, ३० वर्ष कि क्येटी परकिन्स् ले आफ्नो प्रभुसँगको सम्बन्ध आफुले गर्ने सबैकुरा भन्दा अगाडि राख्छिन् । न्युजिल्यान्डको लागि क्रिकेट खेल्नु मेरो पहिलो सपना थियो । म ५ वर्षको हुदाँ देखि नै, यो सपनाले जति जोस मलाई अरु केही कुराले दिदैँन थियो । मसँग अरु खुबि पनि थियो तर क्रिकेट सबै भन्दा माथि आयो । म मेरो परिवारको कारणले, मेरो जीवनमा परमेश्वरको एक बलियो प्रभाव भएर मण्डली गएर हुर्किएको हुँ । म एकदमै राम्रो र सन्डे स्कुलमा चाडै सिक्ने बच्चा थिए, तर राम्रो बच्चा हुनु र परमेश्वरलाई चिन्नु यी दुई एकदमै फरक कुरा हुन् । यो म १५ वर्षको सम्म हुँदा भयो, केही वर्षको लागि एउटा असल साथीले मलाई मेन्टरिङ गर्यो, तब मैले परमेश्वर सम्बन्धिको पक्षहरु बुझ्न थाले । म सम्झिन्छु एक बिहानी मण्डलीमा, मैले प्रार्थना गरेर उहाँलाई भने कि म उहाँलाई पछ्याउन चाहान्छु, मेरो जीवन उहाँको महिमा गर्नको लागि जिउन चाहान्छु । त्यो क्षणमा, पवित्र आत्माले मलाई भर्नुभयो र भावना र मेरो शरीरमा वृद्धि भएको एड्रेनालिन एकदम अवर्णनीय थियो । तर किनकि म क्रिकेट खेललाई एकदम माया गर्थे, मेरो पेशातिर लाग्नु नै मेरो परमेश्वर बन्यो । मेरो आत्मसम्मान क्रिकेट फिल्डमा मेरो सफलता वा असफलताले नै परिभाषित गर्थ्यो । मेरो स्वभाव मैले त्यो दिन कस्तो खेले त्यसमा निर्धारित हुन्थ्यो । मेरो २०१०–२०११ कठिन सिजन पछि मेरो ह्वाइट फर्नस्मा खेल्ने सपना पहिलेको भन्दा अझ बढि टाढाँ भएको अनुभव भयो । मैले केही कुराहरु बदल्नु आवश्यक थियो । यो भएको अफसिजनले मेरो पूरा जीवन बद्लिदियो । म अप्रिल २०११ मा “अल्टिमेट ट्रेनिङ क्याम्प” मा गए, जुन ख्रीष्टमा केन्द्रित थियो । त्यहाँ मैले अरु खेलाडीहरुलाई पनि भेटे जोसँग परमेश्वरको लागि हृदय थियो, सबैजना आफ्नो खेलको वातावरणमा परमेश्वरको बारेमा अझ बुझ्न चाहान्थे । परमेश्वरले मेरो फिल्डको परिणाममा होइन तर मेरो खेल खेलाईमा वास्ता गर्नु हुन्छ भन्ने सत्यले मेरो आखाँ खुल्यो । मैले परमेश्वरको निम्ति खेल्न सिके, एक दर्शकको लागि र मेरो साँचो मूल्य, जुन परमेश्वरमा मात्र भेटिन्छ । जसै हिउँद लाग्यो, मेरो मिल्ने साथीले मलाई चुनौती दियो कि परमेश्वर मेरो क्रिकेट खेलमा कहाँ हुनुहुथ्यो । सत्य यही थियो कि उहाँ कतै पनि हुनुहन्न थियो । पछि धेरै प्रार्थना र म कहिल्यै पनि ह्वाइट फर्न हुन्न भन्ने वास्तविकता सँगको संघर्ष पछि, मैले के प्राप्त गर्नसक्छु लाई हाईन तर म कस्तो छु त्यसैलाई नै प्रेम कसरी गर्ने भन्ने बुझ्न खोजे । अर्को सिजन नजिकिँदै गर्दा, मैले आफ्नो आजीवनको सपनालाई छोडेको थिए र क्रिकेटलाई प्रभुको हातमा सुम्पिदिएको थिए । जुन स्वतन्त्रता र आनन्दका साथ मैले खेले त्यसले मलाई सफलतातिर डोर्यायो र मैले थाहा पाए अनुसार अहिल्यै सम्मको अविराधी गर्मी, र त्यो फोन कल बाट मैले थाहा पाए कि म ह्वाइट फर्न बन्न सक्छु भनेर ! जसले मेरो आँखा भरि खुशीको आशु ल्यायो । म इच्छा गछु कि म सधैँ यस्तै स्वतन्त्र र खुशीका साथ खेल्न सकु तर म सक्दिन । मैले निरन्तर संघर्ष गरे । जसै जीवन र क्रिकेट मेरो मार्गमा आयो, मैले मेरो ध्यान अर्कातिर मोडे र क्रिकेटलाई नै पूर्ण प्राथमिकता दिए । टि ट्वान्टि विश्वकपको सेमिफाइनलमा, क्रिकेटको लागि मेरो प्रेम अस्तित्वविहीन थियो । म धेरै मन्द थिए । मैले थाहा पाए कि मेरो जीवनमा परमेश्वर छुटिरहनु भएको थियो । मेरो प्रार्थनाहरु एउटा बहिरो कानमा पर्यो भन्ने मलाई लाग्यो, तर वास्तवमा, त्यो म थिए जो परमेश्वरप्रति बहिरो भएको थिए । जब म न्युजिल्यान्ड फर्के, मैले सहयोगको लागि हात फैलाए । म च्यापलिन र मानसिक सीप भएको प्रशिक्षकसँग भेटे । म मण्डली जाने कुरामा एकदम अनुशासित बने र मेरो खेललाई बाटोमा आउन दिइन । म एउटा भइरहेको काम जस्तै व्यक्ति हुँ, तर मलाई थाहा छ कि म सहि दिशामा गईरहेको छु – प्रभुसँग नजिक र एकदम नजिक । जब म हार्छु सधैँ मेरो हारको सामना राम्रोसँग गर्न सक्दिन । यो निरन्तर भइरहने युद्ध हो । तर म आफूलाई परमेश्वरको सत्यताको सम्झना गराउने प्रयास गर्छुः म पर्याप्त छु, म पूर्ण रुपले प्रेम गरिएको छु । जब खेल्ने क्षमतामा मेरो आत्मबल कम हुन्छ तब म आफूलाई २ तिमोथी १ः७ सम्झाउँछु जसमा लेखिएको छ, “.. परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ ।” यो सत्यतासँग मैले १०० – मिटरको दौड सुरु हुने ब्लकमा उभिएको एक खेलाडीको एउटा बलियो दृष्य जोडेको छु । बन्दुक पड्किनु र दौडको अन्त्यको बीचमा जे पनि हुन्छ त्यसले अहिलेको जीवनमा खेलाडीको तत्कालीन भविष्यमा प्रभाव पार्छ । तर त्यो खेलाडीको लागि परमेश्वरको प्रेम र बलिदान दौडको सुरु देखि अन्त्यसम्म हुन्छ । अब मेरो उद्देश्य भनेको मेरो खेलमा र मेरो जीवनमा मेरो विश्वासले एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको होस् । र अरु खेलाडीको जीवनमा पनि यहि कुरा देख्दा म त्यसलाई एकदमै कदर गर्छु । क्येटी परकिन्स् , न्युजिल्यान्डका क्रिकेटर